M मल्टिचेनेल रणनीतिहरू जसले तपाईंको बिक्रीलाई सुधार गर्दछ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B3B बजार समाचार
अप्रिल 8, 2021 अप्रिल 7, 2021 स्टेफनी स्नाइडर B2B, ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न लगभग एक कला रूप हो।
ग्राहकको वफादारी र पुन: खरिद कायम राख्न प्रत्येक लेनदेन प्रयास हो।
एक सेवा वा एक उत्पादन को pruchase वृद्धि एक जटिल रणनीति हो।
तल तीन मल्टिचेनेल रणनीतिहरू छन् जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नम्बरहरू सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
पुन: मार्केटिंग तपाइँका ग्राहकहरूसँग सम्पर्कमा रहन्छ र उनीहरूले पहिले देखेका विशेष उत्पादनहरूको अनुस्मारकको रूपमा कार्य गर्दछ।
२. संगठित हुनुहोस्
एक संगठित व्यवसाय छोटो र लामो रन मा ग्राहकहरु को लागी अधिक आकर्षक छ। यो किन मल्टिचेनेल हुनुको मतलब सबै प्लेटफर्महरूमा उपस्थित हुनु भन्दा बढी हुनुपर्दछ। तपाईं एक रणनीति को लागी आउँनुहुन्छ जुन तपाईंको उद्यम संगठन कौशल बिक्रीमा अनुवाद गर्ने देखाउँदछ।
प्राय: तपाई धेरै च्यानलहरू सूचीबद्ध गरेर सुरू गर्नुहोस्। पछि, तपाईले त्यसलाई छनौट गर्नुभयो जुन तपाईको व्यावसायमा लागु हुन्छ। उदाहरणका लागि, कसरी ओमनी च्यानल ग्राहक समर्थन तपाइँको व्यवसाय लाई असर गर्छ? यसको भूमिका परिभाषित गरेर, तपाईंसँग हातमा अधिक सरल रणनीति छ।
सत्यवस्तु, ग्राहकले भन्न सक्छन् जब ब्यापारमा फोकसको अभाव छ र हरेक च्यानलमा केवल हात्ती बजार छ। जे भए पनि यसमा तपाईले कति मेहनत गर्नुभयो, तपाई कम बिक्रीमा मात्र समाप्त हुनुहुनेछ। त्यसोभए यो तपाइँको व्यवसायलाई मिल्ने च्यानलहरूमा ध्यान दिएर सुरु गर्नु बुद्धिमानी हो। अरू सबै छोडेर जान्छ।
यसबाहेक, सँधै तपाईंको श्रोतालाई पहिला राख्नुहोस् र तिनीहरूले कसरी तपाईंको उत्पादन र सेवाहरू विभिन्न च्यानलहरूमा प्राप्त गर्नेछन् भनेर सोच्नुहोस्। मल्टिचेनेल केवल बिक्रीमा अनुवाद गर्दछ जब ग्राहकहरू बुझ्छन् जुन तपाईं पार गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यो सबै संगठित हुँदै र सही च्यानलहरू छान्दा सुरू हुन्छ।
यस प्रक्रियालाई सजिलो बनाउनको लागि एक तरीका भनेको तपाईंको ग्राहकहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण नोटहरू लेख्नु हो। तपाईं समावेश गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंको ग्राहकहरूको स्थान
चाहिन्छ र चाहन्छ
त्यस्ता सामग्री एक नेत्र खोल्न को लागी र तपाईंलाई चाँडै बढ्दो बिक्री नोटिस गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
२. विशिष्ट च्यानलहरूका लागि उपयुक्त सामग्री
सामान्यतया, के एक च्यानलको लागि काम गर्छ भने अर्कोमा उत्पादक नहुन सक्छ। यसले बहु च्यानलहरू प्रयोग गरेर बिक्री लिनको लागि अधिक लिन्छ। तपाईंले बिभिन्न च्यानलहरूका लागि बिभिन्न सन्देशहरू सिर्जना गर्ने महत्त्वलाई बुझ्नुपर्दछ।
उदाहरण को लागी, केहि लामो पछाडि लेखिएको सामग्रीमा फस्टाउँछ किनभने श्रोताले पढ्न र प्रश्नहरू सोध्न समय लिन्छन्। अर्कोतर्फ, अरूले सन्देश साथमा पास गर्ने हडताल छविहरू मा उत्कृष्ट हुन्छन्। जब तपाईं तिनीहरूलाई मिश्रण गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो लक्षित दर्शकहरूमा पुग्न सक्नुहुन्न।
त्यसकारण, मल्टिचेनेल मार्केटिंगको शीर्ष चरणहरू मध्ये प्रत्येकले के काम गर्दछ भनेर बुझ्दैछ। एकचोटि तपाईंले यो अधिकार पाउनुभयो, बिक्रीहरू रोलिंग सुरु हुन्छ, र तपाईंको व्यापार बढ्छ। यस विन्दूमा, तपाईं आफैं कार्य गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ वा विशेषज्ञले काममा लिन सक्नुहुन्छ यदि बजेटले अनुमति दिन्छ। मल्टिचेनेल विशेषज्ञलाई काममा लगाउनु भनेको लगानी हो जुन तपाईंको व्यावसायको लागि आवश्यक प्रमाणित गर्न सक्छ।
यद्यपि सबै काम उनीहरूमा नत्याग्नुहोस् किनकि उनीहरूले तपाईंको व्यवसायलाई बुझ्न सक्दैनन्। प्रत्येक च्यानलको अवधारणा मार्फत जान र अन्तर्क्रिया अध्ययन गर्न समय छुट्याउनुहोस्। टिप्पणीहरू र सन्देशहरू मार्फत ग्राहकहरूको प्रतिक्रियाको माध्यमबाट, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि के काम गरिरहेको छ र के सुधार गर्न आवश्यक छ।
सत्यवस्तु, ग्राहकले भन्न सक्छन् जब ब्यापारमा फोकसको अभाव छ र हरेक च्यानलमा केवल हात्ती बजार छ।
Re. पुन: बजार विज्ञापन लागू गर्नुहोस्
कहिलेकाँहि ग्राहकहरु तपाइँको साइट मा केहि उत्पादनहरु हेर्नुहोस् र तिनीहरूलाई कार्टमा राख्नुहोस्। यद्यपि यी वस्तुहरू त्यहाँ बस्छन् र केही समय पछि परित्याग गर्न पनि थाल्छन्। त्यो हराएको बिक्रीको एक उदाहरण हो त्यसैले किन तपाईंलाई पुनः मार्केटिंग रणनीतिहरू लागू गर्न आवश्यक छ।
पुन: मार्केटिंग तपाइँका ग्राहकहरूसँग सम्पर्कमा रहन्छ र उनीहरूले पहिले देखेका विशेष उत्पादनहरूको अनुस्मारकको रूपमा कार्य गर्दछ। जब यो बहु च्यानलहरूमा हुन्छ, तपाईं कार्टको आईटमहरू बिक्रीमा परिवर्तन देख्न थाल्नुहुन्छ।
इमान्दारीपूर्वक, ग्राहकहरूको लागि उनीहरूले कार्टमा राखेका सबै चीजहरू सम्झन यो सजिलो छैन, त्यसैले तिनीहरूलाई नरम रूपमा सम्झाउने यो एउटा तरिका हो। तपाईले बिक्रीमा वृद्धि देख्नु भयो र अझ धेरै आईटमहरू पनि अल्ट्रामा उडान गर्दै मल्टिचेनेलमा पुन: बजारका लागि धन्यवाद छ।
सामान्यतया, जब तपाईं यी उत्पादनहरूका लागि आँखा मनपर्ने विज्ञापनहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, तिनीहरू ग्राहकको ध्यान लिन्छन्। त्यस पछि, लक्षित उपायहरू लागू गर्नुहोस् जुन तपाईंको वेबसाइटमा सबै च्यानलहरू कभर छन्। तपाईं अगाडि जान सक्नुहुन्छ र प्रत्येक सम्भावित ग्राहकलाई आईडी तोक्न वा उनीहरूको कुकीहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले, तपाई उपयुक्त विज्ञापनहरू तिनीहरूको भरमा पठाउनुहुन्छ।
यस्तो लक्ष्यीकरणले ईमेल मार्केटि from देखि सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू सम्म सबै कोण ढाक्छ। परिणाम अधिक बिक्री र व्यापार वृद्धि हो।
मल्टिचेनेल रणनीतिहरूले तपाईंलाई फराकिलो दर्शकहरूलाई पहुँच दिन्छ जसले तपाईंको बिक्रीलाई बढि बिक्रीमा ल्याउन सक्छ। जे होस्, तपाईंले च्यानलहरू पहिचान गर्नुपर्दछ जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ र प्रत्येकका लागि सही सन्देशहरू छन्। साथै, पुन: मार्केटिंगले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको पहिले नै मनपर्ने उत्पादनहरू सम्झन मद्दत गर्दछ।
सांप्रदायिक समाचार डिजिटलमार्केटिंग मार्केटिङ multichannel बिक्री रणनीति